Waa maxay sababta Fiidiyowyadaada Shirkadeed ay u tabayaan Calaamadda, iyo waxa laga yeelayo | Martech Zone
Dhammaanteen waan ognahay waxa loola jeedo qof markuu dhahayo "fiidiyowga shirkadaha". Aragti ahaan, ereygu wuxuu khuseeyaa fiidiyoo kasta oo ay sameyso shirkad. Waxay ahaan jirtay muujiye dhexdhexaad ah, laakiin hadda maahan. Maalmahan, in badan oo naga mid ah oo ku jira suuq-geynta B2B ayaa leh video shirkadaha xoogaa xarago leh.
Taasi waa sababta oo ah fiidiyowga shirkaddu waa qallafsan yahay. Fiidiyowga shirkaddu wuxuu ka kooban yahay muuqaallo kayd ah oo ay leeyihiin shaqaale aad u soo jiidasho badan iskaashi qolka shirarka. Fiidiyowga shirkaddu wuxuu ka kooban yahay madaxa dhididka ee akhrinta dhibcaha teleprompter. Fiidiyowga shirkaddu waa dib-u-soo-koobid dhacdo oo ka bilaabata dadka iyagoo ka helaya magacooda miis miiska saaran kuna dhammaanaya sacabbo dhagaystayaasha.
Marka la soo koobo, fiidiyowga shirkaddu waa caajis, waxtar la'aan, iyo luminta miisaaniyadda suuqgeyntaada.
Shirkadaha looma xukumi doono inay sii wadaan sameynta shirkadaha fiidiyowyo. Suuqgeeye ahaan, waxaad dooran kartaa inaad sameyso fiidiyowyo soo jiidasho leh, wax ku ool ah, oo keena natiijooyin dhab ah.
Waxaa jira saddex tallaabo oo muhiim ah oo la raaco si loo bilaabo safarkaaga ka fog video shirkadaha iyo galay suuqgeynta fiidiyowga ee wax ku oolka ah:
Ka bilow istaraatiijiyad.
Maalgeli hal abuur.
Ku kalsoonow dhagaystayaashaada.
Tallaabada 1: Ka bilow Istaraatiijiyad
Inta badan shirkadaha Qorshaynta fiidiyowgu wuxuu ku bilaabmayaa afar eray oo fudud: Waxaan ubaahanahay muuqaal. Mashruucu wuxuu ku bilaabmayaa kooxda iyagoo mar hore go'aansaday in fiidiyowgu yahay waxa loo baahan yahay iyo in tallaabada xigta ay tahay in la sameeyo shayga.
Nasiib darrose, toos ugu boodka wax soo saarka fiidiyowga ayaa ka boodaya tillaabooyinka ugu muhiimsan. Fiidiyowyada shirkaduhu waxay ku dhasheen la'aanta istiraatiijiyad fiidiyow oo qeexan. Kooxdaada suuq geyntu kuma dhex boodi doonaan barxad bulsheed cusub ama kafaala qaad dhacdeed iyadoon lahayn istiraatiijiyad iyo ujeedooyin cad, haddaba maxay fiidiyowgu uga duwan yahay?
Tusaale: Umault - Oo Ku Xaniban Muuqaal Shirkadeed
Kahor intaadan quusin wax soo saarka fiidiyowga, waqti si aad ugu shaqeyso istiraatiijiyad fiidiyowga ah. Uguyaraan, hubi inaad kajawaabi karto su'aalaha soo socda:
Waa maxay ujeedka fiidiyowgaan? Halkee ayuu ku habboon yahay safarkaaga macmiilka? Mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee keena shirkadaha fiidiyowgu ma caddaynayo halka uu fiidyowgu ka soo baxayo qolka iibka. Fiidiyowgu wuxuu u adeegaa doorar kala duwan heerarka kala duwan ee safarka macaamiisha. Fiidiyowga marxaladda hore wuxuu u baahan yahay inuu ku dhiirrigaliyo dhagaystayaasha inay sii wadaan ku lug lahaanshaha magacaaga. Fiidiyowga marxaladda dambe wuxuu u baahan yahay inuu u xaqiijiyo macmiilka inay gaarayaan go'aanka saxda ah. Isku dayga ah in la isku daro labada horseed ayaa a qas aan khaldaneyn.
Yuu yahay bartilmaameedka dhageystayaasha fiidiyowgaan? Haddii aad leedahay dhowr qof iibsadaha ah, iskuday inaad dooratid hal mid oo aad kuhesho hal fiidiyow. Isku dayga inaad la hadasho qof walba waxay kaa dhigeysaa inaad lahadasho cidna. Waxaad had iyo jeer sameyn kartaa dhowr nooc oo fiidiyowga ah si aad ula hadasho dhagaystayaasha waxyar ka duwan.
Xagee lagu isticmaali doonaa fiidiyowgaan? Ma waxay kuxirantahay bogga soo degitaanka, iyadoo lagu dirayo emayl qabow, furitaanka shirarka iibka? Fiidiyowgu waa maalgashi weyn, waana wax la fahmi karo in daneeyayaashu ay doonayaan inay u adeegsadaan xaalado badan intii suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, fiidiyowgu wuxuu u baahan yahay inuu yiraahdo oo sameeyo waxyaabo aad u kala duwan oo kuxiran Macnaha guud waxaa loo isticmaali doonaa. Fiidiyowga baraha bulshada wuxuu u baahan yahay mid gaaban, toos ah, isla markaana xaq u leh barta si ay uga qayb galaan daawadayaasha inay joojiyaan duubista. Fiidiyowga bogga soo degaya waxaa ku hareereysan nuqul siinaya dhammaan faahfaahinta rajada uu rabi karo.
Tixgeli sameynta noocyo badan oo fiidiyowga ah adeegsiyo kala duwan. Darawalka ugu qiimaha badan ee abuuraya fiidiyow waa maalinta wax soo saarka. Waqtiga dheeriga ah ee lagubixiyay tafatirka noockale ama goos gooska la bartilmaameedsaday ayaa ah qaab kharash-ku-ool ah oo masaafo dheeri ah looga saaro bartaada.
Qaadashada waqti aad ku caddeyso istiraatiijiyaddaada, ama kooxdaada ama hay'addaada, ayaa caddeynaysa waxa fiidiyowgu u baahan yahay inuu sheego oo sameeyo. Taasi kaligeed waxay qaadataa tallaabada ugu weyn ee ka socota dhulka "shirkad", maxaa yeelay waxaad hubin doontaa in fiidiyowga uu leeyahay farriin cad, bartilmaameed bartilmaameed, iyo ujeedo.
Tallaabada 2: Maalgeli Hal-abuurka
Inta badan shirkadaha fiidiyowyadu waxay dib u soo celinayaan isla koobkii daallanaa ee soo noqnoqday. Immisa fiidiyoow ah oo aad aragtay oo ka bilaabmaya qorraxda oo ka soo baxda Dunida, ka dibna u jiido isgoys mashquul badan oo leh noodhadh dadka lugaynaya, oo muujinaya xirnaanta? Haa. Fiidiyowyadani waa fududahay in la sameeyo oo ay fududahay in la iibiyo silsiladda go'aan qaadashada, maxaa yeelay waxaad tilmaami kartaa hal milyan oo tusaalayaal ah. Dhamaan kuwa kula tartamaya ayaa sameeyay iyaga.
Taasina waa sababta dhabta ah ee aysan waxtar u lahayn. Haddii tartamayaashaada oo dhami ay leeyihiin fiidiyoow qaab isku mid ah, sidee uga filan kartaa rajo ah inaad xusuusato midkee kaa lahaa? Fiidiyowyadan waa la ilaaway isla marka la daawado ka dib. Rajooyinku waxay sameynayaan dadaalkooda saxda ah waxayna baarayaan adiga iyo dhamaan tartamayaashaada. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad daawato fiidiyowgaaga isla marka tartanku dhammaado. Waxaad ubaahantahay inaad sameysato fiidiyoo sameeya rajada in lagugu xasuusto.
Haddii aad sameysay shaqada gurigaaga oo aad abuurtay istiraatiijiyad fiidiyoow oo dhammaystiran, waxaa laga yaabaa inaad horeyba u haysatay fikrad ah hab soo jiidasho leh oo farriintaadu u gaadho. Waxa ugu weyn ee ku saabsan istiraatiijiyadda fiidiyowga waa taas waxay tirtiraysaa xulashooyinka hal abuurka ah ee muranka keena. Tusaale ahaan, mar hadaad ogaato inaad rabto inaad sameyso fiidiyoow go aan-heer ah oo loogu talagalay CIO-yada shirkadaha heerka shirkadaha, waxaad qorsheyn kartaa inaad sameyso fiidiyow markhaati ah si aad ugu xaqiijiso inay ku jiraan shirkad wanaagsan. Waad ka takhalusi kartaa qorshe kasta oo aad ku samaynayso fiidiyow horusocod ah oo badeecad ah ama goob sumcad dhiirrigelin leh. Fiidiyowyadaasi waxay si fiican u shaqeyn lahaayeen goor hore safarka macaamiisha.
Tusaale: Deloitte - Xarunta Taliska
Fikradda hal-abuurka ahi maahan inay ahaato heer heer sare ah oo Christopher Nolan ah. Waxa aad rabto inaad sameyso ayaa ah inaad hesho hab aad toos ugula hadasho dhagaystayaashaada qaab soo jiidasho leh oo xusuus leh.
Maalgelinta hal-abuurka ayaa ka baxsan fikradda fiidiyowga. Fiidiyowga suuqgeynta ah ee B2B wuxuu u baahan yahay qoraal soo jiidasho leh iyo aragti cad oo lagu dhejiyo taleefoonnada sheekooyinka kahor intaan wax soo saarku bilaabmin. Fiidiyowga "shirkadeed" ayaa badanaa ah) aan la qorin ama b) liistada qodobbada hadalka oo la guuriyey laguna dhejiyay qaab qoraal ah.
Fiidiyowyada aan qorneyn waxay noqon karaan kuwo awood leh, waxay kuxirantahay sheekada aad rabto inaad sheegto. Waxay u shaqeysaa si fiican markhaati ama sheeko qiiro leh. Diiwaangelintu maaha wax aad u fiican oo loogu talagalay soosaarida badeecada ama barta calaamadaha. Marka fikirka fiidiyowgu yahay wareysi agaasimaha guud, markaa waxaad hal-abuurnimo u fidineysaa agaasimaha guud iyo tifaftiraha fiidiyowga ah ee u baahan inuu si wadajir ah u wada galiyo wax isku xidhan. Taasi caadi ahaan waxay u horseedaa waqtiyo wax soo saar dheer kadib iyo dhibco muhiim ah oo seegay.
Qoraa-yaqaan wanaagsan ayaa samayn kara waxyaabo yaab leh oo loogu turjumayo qodobbadaada hadalka qaab muuqaal ah. Qoraalka qoraalka fiidiyowga waa xirfad gaar ah oo aysan wada lahayn nuqul qorayaasha. Qorayaasha qoraalada badankood, qeexitaan ahaan, waxay ku fiican yihiin muujinta nuxurka qoraalka. Maaha inay kufiican yihiin muujinta waxyaabaha ku jira maqal / muuqaal muuqaal ah. Xitaa haddii aad guriga ku haysato qoraa-qoraalo ku saabsan kooxdaada suuq-geynta ah, tixgeli inaad ka qaybgasho qoraa khabiir ku ah qoraalka fiidiyowyadaada.
Talaabada 3: Ku kalsoonow dhagaystayaashaada.
Waxaan lumiyay tirinta tirada jeer ee aan maqalnay nooc ka mid ah:
Waxaan u iibgeynaa CIO-yada. Waxaan ubaahanahay inaan ahaano suugaan hadii kale aysan helin.
Raali noqo Waxaad dhaheysaa CIO-yada shirkadaha waaweyn waxay u baahan yihiin wax kasta oo loo qeexay iyaga? Marka xigta, waxaad dhihi doontaa dadku ma jecla xujooyinka ama sheekooyinka sirta ah.
Aaminaada dhagaystayaashaada waxay ka dhigan tahay inaad aaminto inay caqli leeyihiin. Inay ku fiican yihiin shaqooyinkooda. Inay rabaan inay daawadaan waxyaabaha ku maaweeliya iyaga. Dhegeystayaashu way ogyihiin inay tahay ganacsi. Laakiin marka ay tahay inaad daawato xayeysiiska, miyaadan ka doorbideynin barta GEICO ee qosolka badan xayeysiinta gawaarida maxalliga ah ee qallalan?
Haddii dhagaystayaashaadu mashquul yihiin (iyo kuwa aan ahayn), iyaga sii sabab ay waqti ugu qaataan daawashada fiidiyowgaaga. Haddii ay si fudud dib ugu cusbooneysiiso dhibcaha rasaasta xaashidaada iibka, markaa way iska dhaafi karaan taas bedelkeeda. Fiidiyow adag ayaa daawadayaasha siinaya sabab ay ugu qaataan 90 ilbidhiqsi oo maalintooda ka mid ah.
Fiidiyow adag waa midka kaqeyb gala dhagaystayaashaada, kana dhiga iyaga inay fekeraan, oo u keenaya qiime dheeri ah. Waxay bixisaa wax aan laga soo xaroon karin xaashida wax lagu iibiyo ama tafaasiisha. Fiidiyowyadaada B2B waa inaysan awoodin in lagu beddelo PowerPoint.
Tusaale: Nuance - Annaga, Macaamiisha
Fiidiyowga shirkaddu wuxuu ka koray meel wanaagsan. Maaddaama fiidiyowgu uu noqday mid la heli karo oo dhexdhexaad ah, shirkaduhu waxay rabeen inay ku boodaan isbeddellada. Hadda fiidiyowgaasi waa shuruud loogu talagalay suuqgeynta casriga ah, hubi inaad abuureyso fiidiyowyo kobcinaya iibka isla markaana keenaya ROI muhiim ah. Corporate fiidiyowga halkaas kuma gaari doono Fiidiyow leh istiraatiijiyad cad, hal abuur xariif ah, oo ku kalsoon kalsoonida dhagaystayaasheeda kaliya.
Kala soo bax hageheena buuxa si aad u hesho talooyin dheeraad ah oo ku saabsan ka baxsiga dabinka fiidiyowga shirkadaha:
7 Dariiqo oo looga Fogaado sameynta Fiidiyow Shirkadeed
Tags: fiidiyowga ganacsigavideo shirkadahasuuqgeynta fiidiyowga shirkadahadeloittehooskacaadaysnaansuuqgeynta fiidiyowgaxeeladaha suuqgeynta fiidiyowgaistiraatiijiyadda suuqgeynta fiidiyowgaistaraatiijiyada fiidiyowgafiidiyowyo ganacsi